नेपाली हिन्दूहरुको पर्व दशैँ सुरु भइसकेको छ । परम्परागत रुपमा दशैँ मनाउने चलन नेपाली समाजमा धेरै पहिलेदेखिकै हो । खासगरी आसुरीभावमाथि सत्यको विजयको उत्सवस्वरुप मनाउने गरिए पनि वर्तमान समयमा दशैँ साझा पर्वको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । दशैँको महत्व, परम्परा अनि यसको प्रभावबारे वाल्मीकि क्याम्पसको पुराण र इतिहास विषयकी सहप्राध्यापिका प्रियंवदा काफ्लेसँग खरीबोटकी सकला दवाडीले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :
दशैँ मान्ने चलन कसरी सुरु भयो ?
यो पर्व धेरै पहिलेदेखि मानिआइएको छ । खासगरी देवी भागवतमा नवरात्रको व्रतको विधान पाइन्छ । शरद र वसन्त काल गरी दशैं दुई समयमा मनाउने गरिन्छ । चैत्रे नवरात्र र शारद नवरात्र पनि हुन्छ ।
दशैं मनाउनुको उद्देश्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ । दशैँको समय मौसम परिवर्तनको समय हो । यो बेला शारीरिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको हुन्छ । त्यसैले त्यो समयमा व्रत गर्नुपर्छ । स्वस्थकर कुरा खाने रोग नलाग्ने मिठा मिठाइहरु चढाउने गरिन्छ । जे पायो त्यही खाँदा अपच हुने र विभिन्न समस्या शरीरमा देखिने गर्छ । आफू कमजोर भएको बेला देवीको आराधना रोग नलागोस् भनेर प्रार्थना गर्ने परम्परा विकास भएका कुराहरु पनि पुराणबाट देखिन्छ । वस्तुतः दशैंमा खाने भन्दा पनि देवीको पूजा गर्ने, आराधना गर्ने भन्ने हो ।
यो प्राचीन कालमै सुरु भएको पर्व हो किनकि पुराणहरुमा नवरात्रको कुरा उल्लेख छ । पुराण जति पुरानो छ, त्यति नै पुरानो छ दशैं पनि । १८ पुराणभित्रकै देवीभागवतलाई महापुराण नमानी उपपुराण पनि मानिएको छ । यो १८ उपपुराणभित्रकै कुरा हो भन्ने देखिन्छ । पुराणहरुकै अनुसार देवीको राक्षससँग युद्ध भएको समय, रामको रावणसँग युद्ध भएको समय, रावण जलाउने पनि चलन छ, परम्परा देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा त्रेता युगदेखि नै दशैँ मान्ने चलन चलिआएको छ । देवीले राक्षस वध गरेको हेर्ने हो भनेदेखि तत् तत् पौराणिक समय तथा आधुनिक समयलाई नहेरी यसलाई शाश्वत रुपमा हेरिन्छ ।
चढाएर उम्रिएको जमरालाई पवित्र जमराको रुपमा लिने गरिन्छ । यसरी पूजा गर्दा उम्रिएको जमरा नै प्रसादको रुपमा लिइयो ।
धार्मिक दृष्टिले हेर्दा यो समयबाट सुरु भयो भनिँदैन तर आधुनिक इतिहासकारहरुले आफ्नै किसिमको कुरा गरेको देखिन्छ । राजाहरुले यसलाई विजय पर्वको रुपमा मनाएको कारणले गर्दा क्षेत्रीहरुले बढी विशेषतः दशैं मनाउने गरेको भनिन्छ । विजयको पर्वको रुपमा मान्ने चलन विकास भएको देखिन्छ ।
यो सम्पूर्ण रोगहरु जित्ने पर्व पनि हो । राक्षसी प्रवृत्तिलाई नाश गर्ने, दुर्भावना, दुराचारलाई नाश गर्ने पर्वको रुपमा पनि यसलाई लिइन्छ । दशैं असत् तत्वहरुलाई नाश गर्ने र सत् तत्वहरुलाई उठाउने पर्व हो । सात्विक तत्वहरुलाई बढवा दिने पर्व हो ।
दशैँमा जमरा लगाउने पनि छ, जमराको साइनो दशैँसँग कसरी जोडियो ?
घटस्थापनाको दिनमा घट(कलश) स्थापना गरिन्छ । कसैले माटोको घट स्थापना गर्छन् भने कसैले सुवर्ण घटस्थापना पनि गर्न सक्नुहुन्छ । घटस्थापनामा कलशसँगै दियो गणेश पनि स्थापना गरिन्छ । मुख्य घट, घटकै वरिपरि चढाइएको जौ, तिलहरु नै पछि उम्रिन्छ, कसैले जमरा अलग्गै टपरीमा राख्ने गर्दछन् । चढाएर उम्रिएको जमरालाई पवित्र जमराको रुपमा लिने गरिन्छ । यसरी पूजा गर्दा उम्रिएको जमरा नै प्रसादको रुपमा लिइयो । त्यो ताजा हुन्छ, अत्यन्तै पवित्र हुन्छ, स्वस्थकर अमृतसमान मानिन्छ । पवित्र वस्तुलाई टाउकोमा सिउरिँदा देवीको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ भन्ने आस्था, परम्परा छ । घटस्थापनापछि सप्तमी तिथिमा फूलपाती भित्र्याउने चलन छ नेपालमा । योचाहिँ गोरखाबाट नुवाकोट हुँदै ल्याउने चलन छ । यसरी ल्याइएको फूलपाती हनुमान ढोकामा भित्र्याउने प्रचलन छ ।
दशैँमा दिइने पशुबलीलाई कसरी लिने ?
शाकाहारीहरुल बली दिँदा कुष्माण्ड, घोषक र अलाबु, नरिवल बली दिने चलन छ । मांसभक्षीहरुले पशु बली दिन्छन् । मानिसले जे खान्छ, उसको देवतालाई पनि त्यही चढाउनुपर्छ भन्छ शास्त्रले । जसले पूजा आराधना गर्दछन्, तिनीहरुको भोजन के हो ? त्यो भोजन उनले मान्ने देवीदेवताको पनि भोजन हो भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
पशुबली भनेको पशुताको बली हो । मानवमा दिव्यगुण आर्जन गरेर पाशविक गुणहरु हटाउँदै जाने पशुता हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता यसमा जोडिएको छ ।
त्यो हिंसा होइन, देवीका अगाडि बली चढाइएका पशुहरुले अभ्यय स्वर्ग प्राप्त गर्छन्, उनीहरु कहिले पनि नाश नहुने स्वर्गमा पुग्छन् । मोक्षप्राप्ति हुन्छ । बली दानको निम्ति विशिष्ट हुन्छ । त्यहाँ मारिएको हिंसा होइन भनेर देवीभागवत शास्त्रले भनेको छ । दशैंमा देवीलाई चढाइएका बलीलाई हिंसा मानिँदैन । यसमा कुमारी पूजाको पनि विधान छ । आफूले जे खान्छ, देवीदेवतालाई पनि त्यही चढाउनुपर्छ । कुखुराको अण्डा पनि चढाउँछन् ।
कुमारीको पूजा किन गरिन्छ ?
कुमारीहरु सृष्टिका आधार हुन् । देवीका अंश हुन् । देवीकै आराधना गर्ने पर्व भएको कारणले गर्दा धर्म संस्कृति र परम्परामा स्त्रीजातिको अत्यन्तै ठूलो महत्व छ । आदरणीय स्थान छ । त्यो स्थानलाई छायामा पार्नाले, विदेशी संस्कृतिलाई भित्र्याउनाले समाजमा हत्या, हिंसा बलात्कारजस्ता घटनाहरु बढिरहेका छन् ।
हरेक महिलालाई सम्मान गर्ने परम्परा हिन्दू परम्परा हो । राजनीतिक व्यक्तित्वले अमेरिकामा बलात्कारको घटना बढी हुने भनेको भन्ने हल्ला सुनेको थिएँ । हाम्रो समाजमा त्यतैबाट सिको गरिएको हो । हाम्रो परम्परामा त आदरणीय व्यक्तित्व हुन् नारी । नारीको सम्मान हुन्छ । महिलालाई छोराहरुले आमाजस्तो रुपमा हेर्नुपर्छ । शक्तिको प्रतीक मानिन्छ नारीलाई ।
तपस्वी महिलाहरुको पूजा गरिन्छ । दशैंमा पनि नारीकै पूजा गर्ने हो । कन्या नारीस्वरुपा भएकाले पूजा गर्ने हो । दशमीको दिन पूजा हुन्छ देवी सेलाइन्छ । सेलाएपछि मान्यजनबाट टीका लगाई आशीर्वाद लिइन्छ । ठूलालाई मान्ने संस्कारबाट विकास भएको शाश्वत मान्यता हो ।
दशैंमा सेतो र रातो टीका लगाउने प्रचलनचाहिँ कसरी बन्यो ?
धार्मिक रुपमा सेतो टीका सात्विकताको प्रतीक हो । सात्विक, राजस, तामस तीन गुण हुन्छन् । सुरुवाती समयमा सेतै अक्षताले पूजा गरिएको हुनुपर्छ । यो देवीको पूजा भयो देवीचाहिँ मारकाट गर्ने भइन् । महिषासुर वध गर्ने प्रवृत्तिको देवीमा भएकोले वस्त्रहरु रातो चढाउने प्रचलन छ । रातो टीका केमीकलयुक्त खराब रंगको प्रयोग गर्नु अनुचित छ । रक्तचन्दन, कुमकुमले रंगाउनुपर्छ । बेसारको रचनाले रंगाउनुपर्छ । सद्गुण भएका रंगहरुको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
दशैँमा पशु मार्न नहुने भनी विरोधका आवाजहरु पनि सुनिन्छन् नि हिजोआज ?
हिंसालाई पनि सूक्ष्म रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । वनस्पति पनि सजीव हो नि । पात चुँड्दा पनि हिंसा हुन्छ । फूल टिप्दा पनि हिंसा हुन्छ । हरेक कुरामा हिंसा छ तर हिंसाको पनि श्रेणी हुन्छ । कुन हिंसाचाहिँ क्रुर हो भन्ने कुरा हो । हिंसाबारे शास्त्रमा लामो व्याख्या छ ।
मासु भोजन र साग भोजन दुवै हिंसा नै हो । हिंसाको प्रकार मात्र फरक हो । अर्जुनको कथाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । पशुबली भनेको पशुताको बली हो । मानवमा दिव्यगुण आर्जन गरेर पाशविक गुणहरु हटाउँदै जाने पशुता हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता यसमा जोडिएको छ ।
तर कम हिंसा गरेर बाँच्ने प्रयत्न गर्ने हो । जस्तो कसैलाई चोट पुर्याउँदा पनि हिंसा हुन्छ । चित्त दुःखाउँदा, अरुको काम बिगार्दा, दुःख दिँदा हिंसा हुन्छ । काटेर मारेर मात्र हिंसा हुने होइन । सूक्ष्म रुपमा हिंसा देख्न नसक्दा सागपात खाँदा हिंसा भएको छ जस्तो लाग्दैन ।
दुर्गुणहरुलाई समाप्त पार्ने भनेर खराब भावनाहरु मारेको रुपमा बुझ्नुपर्छ । मुख्य कुरा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार अर्थलाई व्यवस्थित र सन्तुलित जीवन बाँच्नुपर्दछ ।